OSLO: Mahad Abiib Oo Ah Soomaali Dawladda Norway Sharciga Kala Noqotay Oo Go’aansaday Inuu Dalkiisi Hooyo Ku Laabto – somalilandtoday.com
OSLO: Mahad Abiib Oo Ah Soomaali Dawladda Norway Sharciga Kala Noqotay Oo Go’aansaday Inuu Dalkiisi Hooyo Ku Laabto
(SLT-Oslo) Mahad Abiib oo kamid ah Soomaalida ku dhaqan Dalka Norway sharciga wayna ay kala noqotay Dawladda Dalkaasi ayaa sheegay inuu go´aansaday inuu dib ugu noqdo Waddankiisi Hooyo. Wuxuuna u mahadceliyay dadkii garab istaagay xiliyadii adkaa ee uu soo maray mudadii ay socotay maxkamada u dhaxeysay isaga iyo dowlada Norway.
Abiib ayaa labo isbuuc kahor markii labaad kasoo muuqday maxkamada Oslo, isaga oo racfaan ka gudbiyay go´aankii ay kiiskiisa ka gaartay maxkamada Oslo. Maxkamada racfaanka Oslo ayaan wali go´aan ka gaarin kiiska dacwada racfaanka Mahad Abiib, laakiin Abiib ayaa sheegay inuu go´aansaday inuu Norway isaga tago, uuna ku noqdo dalkiisii, dhinac walba oo ay dacwada racfaanku u dhacdaba.
Mahad iyo kiiskiisa ayaa labadii sano ee ugu danbeeyay dhinaca kale u rogay sharciyada quseeya kala noqoshada dhalashada Norway. Waxaana dartiis iyo dagaalka uu la galay dowlada Norway, lagu badalay ilaa shan qodob oo ku saabsan xeerka soo galootiga dastuurka Norway.